दमन समस्या को निकास होइन। – Tharu Community
By Tharu Community	 November 26, 2015 Leaveacomment
सरकारमा रहेका दलहरुका सांसदहरुलाई उनीहरुको नैतिकताले सदनमा नाराबाजी गर्न दिइरहेको छैन, नैतिक बन्धनले बाँधिएका छन् । सरकारमा गएकै कारण जनस्तरमा अहिले प्रश्न उठेको छ कि फोरम लोकतान्त्रिकले गरेका ८ बुँदे सहमति पुरा भयो त ? समय सीमा के हो ? सहमति कार्यान्वयन नभए पनि फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा बसिरहन्छ ? फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारमा जानुको कारण प्रष्ट पायो, पारेन थाहा छैन, तर सरकारमै गएको कारण बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी परित्याग गरेको समाचारमा आयो । यसले फोरम लोकतान्त्रिकलाई पक्कै पनि सोच्न बाध्य पारिरहेको होला ।
त्यसैगरी एमाओवादी दलले उठाएको जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारामा बशीभूत भएर यो देशमा एक दशक बढी जनयुद्ध चल्यो । जसमा १५ हजार भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । जनयुद्धमा दशौ हजारलाई मर्न र मार्न लगाउने एमाओवादीले थारूहरुले हामीलाई हाम्रो क्लष्टरमा मात्र राखिदिनुस्, हामीलाई नफोडिदिनुस्, हामीलाई तिमीहरुले फलाकेको जातीय स्वशासन चाहिंदैन भन्दा पनि अनसुना गर्न मिल्छ ? एमाओवादीमा यदि रत्तिभर पनि नैतिकता छ भने यतिबेला आन्दोलनमा रहेका जाति, समुदाय, बर्गको आवाजलाई अनसुना गर्न मिल्दै मिल्दैन । किनकि पहिले युद्धमा संलग्नता तिनैको थियो, जो राज्यबाट बहिष्कृत थिए । आज पनि संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रचारित संबिधानबाट तिनै जाति, समुदाय, बर्ग असन्तुष्ट छन् र आन्दोलित छन् । ५५ जना जतिले बलिदानी गरिसके ।
ठूला दलले जो होचो, उसैको मुखमा घोचो को नीति अंगिकार गरेका छन् । तराईलाई आफ्नो ठान्ने, तर तराईका थारू लगायतका आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमलाई मात्र भोट बैंक सम्झिने, दोश्रो दर्जाका नागरिक सम्झने, अधिकार दिन नचाहनेमा अहिले एक नं. मा एमाले, दुई न.ं मा काँग्रेस, त्यसपछि अरु देखिएका छन् । तर यिनी बिना अहिले न संबिधान संशोधन हुने अबस्था छ, न त पुनर्लेखन नै । समस्या समाधानमा ३ दलको मेलमिलाप, सहमति, ईच्छाशक्ति नभएसम्म समस्या समाधान हुन गाह्रो नै छ । समस्या समाधान गर्ने वा नगर्ने चाबी यिनको हातमा छ । त्यसैले समस्याको कारक पनि यिनै हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
आज देशमा घरमूली, घरमूलीका सन्तानहरु, तिनका आसेपासेहरु अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्बाद, सभा, सम्मेलनमा बोलेर, मिडियालाई प्रयोग गरेर आफ्नै अन्य भाईहरुलाई दमन गर्न कम्मर कसिरहेका छन् । साथै परोसीहरु र जान्ने सुन्ने, मान्यगणहरुलाई हामी जे गयौं, ठिकै गरेका छौं, मिलाएर राखेका छौं भनी भ्रम छरिरहेका छन् । तर अन्यायमा परेका असन्तुष्ट सदस्यहरु पनि सँगसँगै, पछिपछि जाँदै त्यो कुराको खण्डन गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि हामीलाई अझ पनि अन्याय भएको छ, जालझेल भएको छ, हामी मान्दैनौं । यो अबस्थामा भारत होस् या चीन या संसारका कुनै देश होस्, संयुक्त राष्ट्र संघ होस्, कोहि पनि एकपक्षीय ढंगले घरमूली र तिनका सन्तानको पक्षमा वकालत गर्नै सक्तैनन् । कि कि परिवारमा अपहेलित सदस्य पनि अधिकारका लागि उनीहरुसँगै पुगिसकेका छन् ।
घरमूलीको अन्यायी बोली, ब्यबहारले एकै घरका सदस्य मधेशी, थारू, जनजाति, दलितको स्वर एक भएको छ । ब्यक्तिगत रुपमा कोही कतै समर्थन गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर संस्थागत रुपमा आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ पनि बर्तमान संबिधानको बिरोध गरिरहेको छ । यस अबस्थामा अन्यायमा परेकाहरुको मेलमिलाप भएको देखेर जलन हुन्छ भने कसको भन्नु के छ र ! अधिकार नदिएरै दमन गर्छु भन्छौ भने पनि केहि छैन । तर दमन, समस्याको निकास होइन, सत्य यही हो । समस्या समाधानको सही उपाय परिवारमा रहेका सबै दाजुभाईबिचमा माया, ममता, अधिकारको बाँडफाँड गर्नु र आपसमा मिलेर बस्नु नै हो ।
त्यसैले, नक्कली राष्ट्रबादको भ्रम छरेर, दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । आफू आपसमा नमिल्दासम्म बाहिरकालाई गाली गर्नु न्यायोचित हुँदैन । मेलमिलाप र एकताले मात्रै बाहिरियासँग लड्न सकिन्छ । मेलमिलाप र एकता हुनलाई अधिकार, माया, ममताको सही बाँडफाँड र आपसमा बिश्वास हुनुपर्छ । यदि कसैले थारू र मधेशीलाई बिखण्डनकारी देख्छ, तराईलाई २ प्रदेशमा बाँड्दा सुरक्षाको हिसाबले खतरा देख्छ भने थारू र मधेशीले पनि देख्ने त्यही हो । मान, सम्मान एकोहोरो हुँदैन, दोहोरो हुन्छ । अहिलेसम्म थारू र मधेशीले गल्ती गरेका छैनन् । हालसम्म असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, नागरिकता बाँडफाँड गर्ने गल्ती, जसले अढाईसय बर्षसम्म शासन गयो, उनीहरुले नै गरेका हुन्, थारू, मधेशीले हैनन् ।
indegenous, nepal, terai, tharu
← Previous post: थारु आन्दोलनसामु यसरी झुकेका थिए राजा-महाराजाहरु
थरूहट आन्दोलनको अपलब्धिNext post: →